ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ရယ်ရမလို ငိုရမလို ဖြစ်သွားရတဲ့ ချစ်သုဝေ – Cele Posts
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ရယ်ရမလို ငိုရမလို ဖြစ်သွားရတဲ့ ချစ်သုဝေ
နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်နှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေ ကတော့ ဂီတလမ်းကြောင်းမှာ အတူတူလျှောက်လှမ်း နေရင်း ဖူးစာဆုံ လက်ထပ်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ကတော့ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တစ်ခုတည်းနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြ တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ သမီးအမြွှာလေးနှစ်ယောက်နဲ့ လူတိုင်းက အားကျရတဲ့ မိသားစုလေး ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ကလည်း ပရိသတ်တွေ အတွက် သူတို့မိသားစုလေးရဲ့ ကြည်နူးစရာ အခိုက်အတံ့ လေးတွေကို အမြဲတမ်း မျှဝေပေးလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေက သမီးတွေ မရှိတုန်း လှတပတ ဓာတ်ပုံရိုက်တုန်း ဓာတ်ပုံတွေကို ဝါးဝါးကြီး အရိုက်ခံပြီးမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လင်းလင်း ရဲ့အပြောကြောင့် ရယ်ရခက်၊ စိတ်ဆိုးရခက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာ ပါတယ်။ ချစ်သုဝေက “ဟမ်😎.. ဖေ..ပုံတွေဝါးနေတယ် focusကသည်းကိုဖြတ်ရမှာလေ😒 ဟမ်..Artဆိုပဲ။ ပြီးတော့.. သည်းက ဝါးလေ လှလေ တဲ့😝🤣🤣 အေးပေါ့ ခုတော့🤔😢 အောင်မလေး..ကိုယ့်ကို ချစ်ပြီး လှတယ်လို့မြင်သူတွေတပုံကြီး..နော့လေ???” ဆိုပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လင်းလင်းရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မျှဝေပေးလာ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သုဝေ ကတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး နားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ခင်ပွန်း ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အပြင် ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ သမီးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာမို့ တကယ့်ကို ကံကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါပဲ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်သုဝေတို့ မိသားစုလေးကို ကြည့်ပြီး အားကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ ပွောလိုကျတဲ့ စကားတဈခှနျးကွောငျ့ ရယျရမလို ငိုရမလို ဖွဈသှားရတဲ့ ခဈြသုဝေ
နိုငျငံကြျော အနုပညာရှငျနှဈယောကျ ဖွဈတဲ့ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝေ ကတော့ ဂီတလမျးကွောငျးမှာ အတူတူလြှောကျလှမျး နရေငျး ဖူးစာဆုံ လကျထပျခဲ့ကွသူမြား ဖွဈကွပါတယျ။ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ ကတော့ စဈမှနျတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ တဈခုတညျးနဲ့ လကျထပျခဲ့ကွ တာဖွဈပွီး အခုဆိုရငျ ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ သမီးအမွှာလေးနှဈယောကျနဲ့ လူတိုငျးက အားကရြတဲ့ မိသားစုလေး ကို ပိုငျဆိုငျထားပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ ကလညျး ပရိသတျတှေ အတှကျ သူတို့မိသားစုလေးရဲ့ ကွညျနူးစရာ အခိုကျအတံ့ လေးတှကေို အမွဲတမျး မြှဝပေေးလရှေိ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ခဈြသုဝကေ သမီးတှေ မရှိတုနျး လှတပတ ဓာတျပုံရိုကျတုနျး ဓာတျပုံတှကေို ဝါးဝါးကွီး အရိုကျခံပွီးမှ ခငျပှနျးဖွဈသူ လငျးလငျး ရဲ့အပွောကွောငျ့ ရယျရခကျ၊ စိတျဆိုးရခကျဖွဈခဲ့ကွောငျး ပွောပွလာ ပါတယျ။ ခဈြသုဝကေ “ဟမျ😎.. ဖေ..ပုံတှဝေါးနတေယျ focusကသညျးကိုဖွတျရမှာလေ😒 ဟမျ..Artဆိုပဲ။ ပွီးတော့.. သညျးက ဝါးလေ လှလေ တဲ့😝🤣🤣 အေးပေါ့ ခုတော့🤔😢 အောငျမလေး..ကိုယျ့ကို ခဈြပွီး လှတယျလို့မွငျသူတှတေပုံကွီး..နော့လေ???” ဆိုပွီး ခငျပှနျးဖွဈသူ လငျးလငျးရိုကျကူးပေးထားတဲ့ ဓာတျပုံတှကေို မြှဝပေေးလာ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခဈြသုဝေ ကတော့ ပြျောပြျောနတေတျပွီး နားလညျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ ခငျပှနျး ကောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အပွငျ ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ သမီးလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတာမို့ တကယျ့ကို ကံကောငျးတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျပါပဲ။ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြသုဝတေို့ မိသားစုလေးကို ကွညျ့ပွီး အားကနြကွေမယျ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။
ခရစ္စမက် ဂါဝန်လေးဝတ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းစွာ ပို့စ်တွေပေးနေတဲ့ ဖွေးစိန်လေး
အင်္ကျီဆင်တူ ၀တ်ကာ Last Christmas သီချင်းလေး နဲ့ ကနေကြတဲ့ မခိုင်လေးတို့ သားအမိ ရဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေး